Fiarovana amin’ny haromotana : ao anatin’ny fotoam-pikotrehana ihany no mahomby ny vaksiny | NewsMada
Fiarovana amin’ny haromotana : ao anatin’ny fotoam-pikotrehana ihany no mahomby ny vaksiny
Hametraka sampana iray hisahana ny haromotana ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena (FAO). Manohana antsika koa ny Alliance mondiale pour la lutte contre la rage (GARC) izay mikarakara ny Andro maneran-tany iadiana amin’ny haromotana isan-taona.
“Hamolavola paikady hamongorana ny haromotana eto amintsika ny tomponandraikitra ka hofaritana ao anatiny ny dingana rehetra hahatongavana amin’ny tanjona tsy hisian’ny olona matin’ny haromotana amin’ny taona 2030”, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra misahana ny ady amin’ny haromotana, eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Edosoa Glenn. Mba hanatrarana ny vina, fomba iray ahatongavana amin’izany ny tokony hahavitana vaksiny ny 70%-n’ny alika eto amintsika. Efa nahazo fitaovana logiciel manokana nentina avy any Afrika Atsimo ny teknisianina malagasy ahafahana manias ny alika eto Madagasikara. Hahafantarana ny vola ilaina hividianana vaksiny ho azy ireo izany. Hatramin’izao, mbola vidiana eny amin’ny mpitsabo biby manokana ny vaksiny ho an’ny alika iarovana amin’ny haromotana. Betsaka ny tokantrano miompy alika tsy manana fahafaha-mividy hanao ny vaksiny nefa mety hitera-doza ho an’ny fiarahamonina.
Eto amintsika, 10 ka hatramin’ny 12 isan-taona ny tranga haromotana mitarika fahafatesana. “Rehefa mby an-koditra ny haromotana eo amin’ny marary iray, 100% ny fiafarany amin’ny fahafatesan’ilay olona”, hoy ity mpitsabo ity. Manodidina ny herinandro vitsivitsy ka hatramin’ny herintaona ny fikotrehan’ny aretina amin’ny olona voakaikitra na voarangotry ny biby mitondra ny haromotana. Ao anatin’ny fotoam-pikotrehana (incubation) ihany anefa no mahomby ny vaksiny atao rehefa voakaikitra na voarangotra ilay olona iray. Antony tsy iandrasana ela izany fa raha vantany vao voakaikitra ilay olona, sasana haingana amin’ny savony sy rano ny fery ary hoentina tsy misy hataka andro eny amin’ny foibe mandray an-tanana izany. 31 ny foibe miparitaka manerana ny Nosy fa ho an’ny faritra Analamanga, eny amin’ny amin’ny Institut pasteur de Madagascar ny ivontoerana misy ny fandraisana an-tanana.
Any Toamasina ny hetsika fankalazana
Homarihina any Toamasina ny Andro maneran-tanty iadiana amin’ny haromotana amin’ity taona ity ny fiandohan’ny volana novambra ho avy izao. Hetsika fanairana ny mpiray ombon’antoka maro sy ny isam-batan’olona hiady amin’ny haromotana no omanina. Hampiavaka ny fanamarihana koa ny fampahafantarana fa misy fiofanana maimaimpoana azo atao amin’ny tranonkala ka ahazoana “certificat des formateurs sur la rage CFR” manokana avy eo. Dimy ny “modules” ampianarina ka misy tombana isaky ny “module”. 18 hatreto ny Malagasy manana izany CFR izany mahafehy ny haromotana sy ny manodidina azy rehetra. Homen’ny minisiteran’ny Fahasalamana fanamarihana koa izy ireo any Toamasina mandritra ny hetsika.